टिकटक भाइरल अश्मिता रानापल र चौका दाउका गायक संगै मिडियामा, लास्टै रमाइलो गर्दै बैनी बनाए, संगै यस्तो नया गीत आउँदै ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)…. – SUDUR MEDIA
April 4, 2021 AdminLeaveaComment on टिकटक भाइरल अश्मिता रानापल र चौका दाउका गायक संगै मिडियामा, लास्टै रमाइलो गर्दै बैनी बनाए, संगै यस्तो नया गीत आउँदै ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)….
काठमाडौँ । केहि समय अगाडी चौका दाउमा खतरा डान्स गरेर भाइरल भएको नाम हो स्यांग्जा वालिङ्ग की अश्मिता रानापल जसले सानै उमेरमा राष्ट्रिय खेलाडी भएर पनि धेरै संघर्ष गर्दै यो स्थानमा आइपुगेको थीइन । उनको त्यो दुख र संघर्ष देखेर सबैले मन पराए । सबैले सहयोग गर्ने भनेर पनि भने र अहिले सहयोग हरु पनि आइरहेको जानकारी गराइन अश्मिताले ।
यसै बिच यहि क्रममा उनले आज चौका दाउका गायक बाबु कृष्ण परियारसंग पनि भेट गरेकी छिन । बाबु कृष्णको पहिलो भेटमै अश्मितालाई बहिनि बनाएका छन् र सधै दाइ बनेर सहयोग गर्ने बाचा पनि गरेका छ गायक बाबुले । चौका दाउ – सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा पछिल्लो पटक भाइरल बनेको गीतको हो यो ।
टिकटक स्क्रोल गर्दा यो गीतमा अभिनय नगरेका भिडियो सायदै छन् । ‘चौका दाउ’ गीतको पहिलो टुक्का हो यो । विजय चन्द दर्पनले भर्खरै बजारमा ल्याएको नयाँ लोकदोहोरी गीत ‘चौका दाउ’ भित्रका अधिकांश टुक्का टिकटकमा भाइरल छन् । निर्देशक तथा कोरियोग्राफर सुनिल क्षेत्रीको निर्देशनछ यो गीतमा ।
उनी गायकसंग आज हामीले टिकटकमा भाइरल बनेको अश्मिता रानापलसंग भेट गराएका छौ हेर्नुहोसः